योगेश भट्टराई, सचिव तथा प्रचार विभाग प्रमुख
२०७८ असोज १५ शुक्रबार ०६:४१:००
एमालेको प्रथम विधान महाधिवेशनको कार्यसूचीमा के–के छन् ?
आज पार्टी अध्यक्ष केपी ओलीले भव्य समारोहबीच प्रथम विधान महाधिवेशनको उद्घाटन गर्नुहुनेछ । विधान, प्रतिवेदन, संगठनात्मक प्रस्ताव प्रतिनिधिका बीचमा छलफलका लागि प्रस्तुत हुनेछ । अध्यक्षले राजनीतिक, महासचिवले संगठनात्मक र उपमहासचिवले विधान संशोधनसम्बन्धी प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुहुनेछ । समूह विभाजन कतिवटामा हुन्छ पछि थाहा हुन्छ, तर उनीहरूका बीचमा प्रतिवेदनमाथि छलफल अगाडि बढ्नेछ ।
विधान महाधिवेशनमार्फत एमालेले कस्तो खालको नयाँ राजनीतिक सन्देश दिन खोजिरहेको छ ?
विधान महाधिवेशन एमालेको जीवनको नयाँ अभ्यास हो । यो अभ्यास एमालेको इतिहासमा मात्रै होइन, अरू राजनीतिक दलको इतिहासमा समेत बिलकुल नयाँ अभ्यास हो । अलि बढी पार्टीको नीति, विधि, विधान निर्माणमा केन्द्रित रहेर हामी छलफल गर्नेछौँ । दोस्रो, अहिले पार्टीमा विभाजनको स्थिति उत्पन्न भएकाले यसलाई चिर्दै फेरि पार्टीलाई एकताबद्ध गर्ने उद्देश्य रहेकाले देशभरिबाट प्रतिनिधिहरूको संख्या अलिक ठूलो हुन पुगेको छ । पार्टीलाई सुदृढ र एकताबद्ध गर्ने सन्देश दिने हो । आगामी निर्वाचनको प्रतिस्पर्धामा एमालेलाई पहिलो पार्टी बनाउन देशभरका कार्यकर्तालाई एकै ठाउँबाट निर्देशन दिने सन्देश दिन खोजेका छौँ । हाम्रो अबको कार्यभार आउने स्थानीय, प्रदेश र संघको चुनावमा बहुमत ल्याउने र त्यसका लागि देशभरिका अगुवा साथीहरूलाई अगाडि बढ्न आह्वान गर्ने काम हामी विधान महाधिवेशनबाट गर्नेछौँ ।
एमालेले जनताको बहुदलीय जनवादको सिद्धान्त र कार्यदिशालाई यो विधान अधिवेशनमा कसरी प्रस्तुत गर्दै छ ? त्यसैलाई विकसित गर्ने तयारी हो या अरू केही योजना छ ?
अब हामी त्यो (जबज)भन्दा एक स्टेप अगाडि गइसकेका छौँ । जबजलाई समृद्ध र सुदृढ गर्दै समाजवादको दिशामा अगाडि बढ्ने भनिसकेका छौँ । अब हामी समाजवादको आधार निर्माण गर्ने काममा लाग्नेछौँ भनिसकेकाले जबजभन्दा एक स्टेप अगाडि बढेका छौँ ।
जबजभन्दा एक चरण अगाडि बढ्ने कुरा गर्नुभो, अहिलेको राजनीतिक प्रतिवेदनले तपाईंले भनेका कुरालाई समेटेको छ वा फरक मत पनि प्रस्तुत हुन्छ ?
अहिलेकै राजनीतिक प्रतिवेदनले सबै विषय समेटेको छ ।
विधान महाधिवेशनबाट के निष्कर्ष दिने तयारीमा हुनुहुन्छ ?
प्रतिवेदनहरू पास हुनेछन् । दोस्रो, विधान महाधिवेशन भनेको एमालेको पुनर्जागरण अभियान हो । यसले एमालेलाई पुनर्जागृत गर्नेछ । बीचमा नेकपाकालीन द्वन्द्व र अन्तर्विरोध थिए, त्यसलाई हल गर्दै पार्टीभित्र हार्दिक एकतासहित सुदृढ पार्टी निर्माण गर्दै आगामी चुनावमा एमालेलाई पहिलो, अब्बल मात्रै होइन कि बहुमतसहितको पार्टीका रूपमा पुनस्र्थापित गर्ने र राज्यका निकायमा संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारमा एमालेको पुनरागमन गर्ने आधार विधान महाधिवेशनले तय गर्नेछ । एमालेलाई सरकारमा कमब्याक गर्ने एउटा आधार तयार गर्नेछ ।
योगेश भट्टराईको आरोप– एकीकृत समाजवादी अवैध सम्बन्धबाट जन्मिएको पार्टी
एमाले नेता भट्टराई अस्पताल भर्ना